Job 18 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
18 Bildad onye si n’agbụrụ Shua wee zaa, sị: 2 “Olee mgbe unu ga-akwụsị okwu a unu na-ekwu?Unu kwesịrị ịghọta, ka anyị kwutụkwanụ. 3 Gịnị mere unu ga-eji were anyị ka anụ ọhịa,+Anyị dịkwa ka ndị na-adịghị ọcha n’anya unu? 4 Ọ na-adọrisị mkpụrụ obi ya n’iwe ya.À ga-ekwo gị gbahapụ ụwa,Ka oké nkume ọ̀ ga-esi n’ebe ọ dị pụọ? 5 A ga-emekwa ka ìhè ndị ajọ omume nyụọ ka ọkụ,+Ikerike ọkụ ya agaghịkwa enwu. 6 Ìhè ga-aghọ ọchịchịrị n’ụlọikwuu ya,+N’ime ya ka a ga-emenyụkwa oriọna ya. 7 A ga-akpara ụkwụ ọ na-azọ ike ike ókè.Ọbụna atụmatụ ya ga-ajụ ya.+ 8 N’ihi na ụkwụ ya ga-eduba ya n’ime ụgbụ,Ọ ga-agara banye n’ọnyà.+ 9 Ọnyà ga-ama ya n’ikiri ụkwụ;+Ọnyà+ ga-ejide ya. 10 Ọ bụ n’ala ka e zoro ụdọ a ga-eji jide ya,Ọ bụkwa n’ụzọ o si aga ka e siiri ya ọnyà. 11 Ụjọ mberede nke gbara ya gburugburu na-eme ka ọ tụwa egwu,+Na-achụ ya ọsọ ụkwụ eru ala. 12 Ike na-agwụcha ya,Ọdachi+ ejikerewo ime ka o tewe ụkwụ. 13 Ọ ga-eri iberibe akpụkpọ ahụ́ ya;Nwa mbụ nke ọnwụ ga-eri aka ya na ụkwụ ya. 14 A ga-esi n’ụlọikwuu ya wepụ ihe ahụ na-enye ya obi ike,+Ọ ga-emekwa ka ọ zọrọ ije gakwuru eze nke ihe egwu. 15 Ihe na-abụghị nke ya ga-ebi n’ụlọikwuu ya;A ga-awụsasị sọlfọ+ n’ebe obibi ya. 16 Mgbọrọgwụ ya ga-akpọ nkụ n’ime ala,+N’elu, alaka ya ga-akpọnwụkwa. 17 A ga-akwụsị ịkpọtụ aha ya n’ụwa,+Ọ gaghịkwa enwe aha n’okporo ámá. 18 Ha ga-esi n’ìhè kwaba ya n’ọchịchịrị,Ha ga-achụpụkwa ya n’elu ala. 19 Ọ gaghị enwe ụmụ na ụmụ ụmụ n’etiti ndị ya,+Ọ dịghịkwa onye ga-afọdụ ndụ n’ebe o bi dị ka mbịarambịa. 20 N’ụbọchị ya, ndị nọ n’Ebe Ọdịda Anyanwụ ga-ekporopụ anya,Ọbụna ndị nọ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ ga na-ama jijiji. 21 Ma nke a bụ ihe na-eme ụlọikwuu nke onye na-eme ihe ọjọọ,Nke a bụkwa otú ọ na-adị onye na-amaghị Chineke.”